Tenga Letrozole poda (112809-51-5) Vagadziri & Vanotengesa - Fekitori
Letrozole (Femara) imishonga inorayirwa kurapwa kwevakadzi vane postmenopausal vane kemukari yakagamuchirwa nekenza yepamusoro kana kuti vakabatwa ne tamoxifen (Nolvadex). Zvimwe zvinokonzera, kushandiswa kwezvinodhaka, nekudzivirira kwemashoko kunofanira kuongororwa vasati vatora mishonga iyi.
Raw Letrozole powder (112809-51-5) video
Raw Letrozole powder (112809-51-5) Tsanangudzo
Raw Letrozole powder is oral non-steroidal aromatase inhibitor, zita rainzi Femara. Inoshandiswa kurapa mamwe maitiro echepamu yemazamu (zvakadai sekenza-hormone-receptor-positive cancer yepamu) kuvakadzi mushure mokunge apera. Raw Letrozole powder inoshandiswawo kubatsira kudzivirira kenza kudzoka. Mimwe mishonga yemazamu inogadzirwa kuti ikure nokukurumidza nehomoni yakasikwa inonzi estrogen. Raw Letrozole powder inoderedza kuwanda kweestrogen muviri unoita uye kunobatsira kuderedza kana kuchinja kuwedzera kwekenza yemukaka.
Estrogens inobudiswa nekutendeuka kwe androgens kuburikidza nebasa re enzyme aromatase. Raw Letrozole powder inovhara maitiro eestrogen nenzira iyi nekukwikwidzana, kusungidzirwa kusungirirwa kune heme yaro cytochrome P450 unit. Chiito chacho chakanyatsojeka, uye Raw Letrozole powder haitapudzi kugadzirwa kwe mineralo- kana corticosteroids. Kusiyana neizvi, chirwere chetestestrogenic che tamoxifen, chirwere chikuru cherapi vasati vasvika aromatase inhibitors, inokonzerwa nokupindira kwayo nestorgen receptor, panzvimbo yekudzivisa isrogen production.
Raw Letrozole powder yakaratidza kuderedza maitiro eesrogen ne98 muzana paanenge achikwidza ma testosterone mazinga. Iro-antiro estrogen action yeRaw Letrozole powder inoshandiswa nevatambi uye mizimba kuti vashandise panguva yekurota steroid kuti kuderedze kuputika pamusana pekuchengetedza kwemvura zvakanyanya uye kudzivirira kuumbwa kwegynecomastia yakabatana mazamu echitema iyo inokonzerwa nemagumisiro emamwe anabolic steroid.
Raw Letrozole powder (112809-51-5) Specifications
Product Name Raw Letrozole powder
Kemikari Name Femara; , 4 '- ((1h-1,2,4-triazol-1-yl) methylene) dibenzonitrile; Letrozol
muchiso Name Femara
Kirasi yeMishonga aromatase inhibitor
Molecular Wsere 285.31 g / mol
Monoisotopic Mass 285.101 g / mol
Kunyorera Point 184-185 ° C
Biological Half-Life 2 mazuva
ruvara Panguva iyo kana kuti kunze-iyo pfupfu
Solubility Mvura Solubility 0.0799 mg / mL
chengetedzo Temperature -20 ° C Freezer
APane 1. yakashandiswa kurapa mamwe marudzi echepamu yemazamu (akadai sehomoni-receptor-positive chenza chepamu) mukati mevakadzi mushure mokunge apera.
Chii Chinonzi Raw Letrozole powder (112809-51-5)?
Letrozole inoshandiswa kurapa mamwe marudzi echepamu yemazamu (zvakadai sehommone-receptor-positive chenza chepamu) mukati mevakadzi mushure mokunge apera. Letrozole inoshandiswawo kubatsira kudzivirira iyo kenza kubva pakudzoka. Mimwe mishonga yemazamu inogadzirwa kuti ikure nokukurumidza nehomoni yakasikwa inonzi estrogen. Letrozole inoderedza uwandu hwewesrogen muviri unogadzira uye unobatsira kuderedza kana kuchinja kuwedzera kweaikenza yemazamu.
Raw Letrozole powder (112809-51-5) inoshanda
Letrozole inoderedza mazinga ehukadzi hwekondomu hormone estrogen mumuviri. Estrogen inokurudzira mamwe kenza yemazamu kuti ikure. Aya makondombera emvere anonzi hormone sensitive kana hormone receptor positive. Letrozole inogona kumira kana kuderedza kukura kwekenza.
Letrozole inoshanda chete kuvakadzi vane chirume.
Mushure mokunge apedza nguva, vakadzi havaiti zvirwere zveesrogen kubva mavari mavari. Asi vanoramba vachibereka zvishoma kuburikidza vachishandisa enzyme inonzi aromatase inoshandura dzimwe mahomoni ezvebonde anonzi androgens muestrogen. Iko kushanduka kunowanzoitika mumashuga, mafuta uye ganda. Letrozole rudzi rwechirwere chinonzi aromatase inhibitor. Inodzivirira aromatase kuitira kuti irege kuchinja uyerogens muestrogen.
Raw Letrozole powder (112809-51-5) Dosage
Nhamba yakakurudzirwa ye Femara ndeye 2.5 mg tablet yakaitwa kamwe chete pazuva, pasina hanya nezvokudya.
Raw Letrozole powder (112809-51-5) zvinobatsira
Zvidzidzo zviviri zvakakuratidza zvakanakira zvevakadzi.
Dare repamusoro reBIG 1-98, rakatanga muna 1998, rakafananidza Femara ne tamoxifen mushure mekuvhiyiwa mumadzimai anonzi postmenopausal anonzi ane hormone-receptor-positive, kenza-yekutanga yekenza yemvere. Migumisiro yakaratidza kuti Femara yakanga iri nani pane tamoxifen ye:
* Kuwedzerwa nguva musati mutsara unodzoka kune avo vanogara vachidzoka
* Kuderedza njodzi yekenza inopararira kune dzimwe nhengo dzomuviri
Hwokudzidza MA-17, yakaitwa muCanada, yakatarisa kana ichitora Femara kwemakore 5 mushure mekutora tamoxifen kwemakore 5 (kwehuwandu hwemakore e10 ye hormonal therapy) inogona kuderedza dambudziko rekenza rinodzokera mumadzimai anonzi postmenopausal anonzi ane hormone -bvumirano-yakanaka, kambani-kutanga kenza yemvere. Zvigumisiro zvakaratidza kuti Femara:
* Yakaderedza ngozi yekenza ichidzoka
* Yakaderedza ngozi yekenza ichipararira kune imwe chikamu chemuviri
kuenzaniswa nokusatora Femara mushure memazana emakore 5 eTamoxifen.
Tenga Letrozole powder kubva kuBuasas.com
Raw Clomiphene Citrate (Clomid) powder (50-41-9)